शिक्षा Archives - E mechi
सञ्चिता लुइटेलको अनुभव : बच्चालाई पहिलो पटक विद्यालयमा पुर्‍याउँदा
यसै शैक्षिक सत्रदेखि बच्चालाई पहिलो पटक विद्यालय पठाउँदै हुनुहुन्छ ? के उनीहरु खुसीसाथ विद्यालय जान्छन् ? विद्यालयमा बस्न रुचाउँछन् ? कक्षाकोठामा रमाउँछन् ? शिक्षक/शिक्षिकासँग झ्याम्मिन्छन् ? आफ्ना साथीहरुसँग घुलमिल हुन्छन् ? सबै बच्चाको हकमा यी प्रश्नहरुले सकारात्मक उत्तर नदिन सक्छ । किनभने पहिलो पटक बच्चालाई भर्ना गरिदिएपछि उनीहरु खुसीसाथ विद्यालय जान मान्दैनन् । आमा र बुवा छाडेर शिक्षक/शिक्षिकासँग झ्याम्मिदैनन् । आफ्नो ओछ्यान, खेलौना छाडेर विद्यालयको कक्षाकोठामा बस्न रुचाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा कसरी बच्चालाई विद्यालय पुर्‍याउने ? कक्षाकोठामा बस्नका लागि कसरी अभ्यस्त गराउने ? कतिपय आमाबुवासँग यसको खास अनुभव नहुन सक्छ । उनीहरु आफ्ना बच्चालाई सहजै विद्यालय पुर्‍याउन सकिरहेका हुँदैनन् । यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरले सञ्चिता लुँइटेलको अनुभव यहाँ साझेदार गरेको छ । सञ्चिता एक अभिनेत्री म
ललितपुर, प्युटारस्थित कालीदेवी मावि कक्षा ८ का विद्यार्थी दर्शन गौतम तीन दिन स्कुल आएनन् । मंगलबार आए तर असहज मान्दै । कारण खोतल्दा थाहा भयो– गणित शिक्षक बज्रकिशोर शाहले गृहकार्य नगरेको भन्दै उनलाई १८० पटक उठबस गर्न लगाएछन् । १५० पल्टसम्म उठबस गरेका दर्शन त्यसपछि बेहोस भए । यो थाहा पाएलगत्तै प्रधानाध्यापक ठाकुर लामा दौडँदै पुगे । कसैले दर्शनलाई हम्किन थाले, कसैले पानी छम्किए । झन्डै आधा घण्टापछि उनको होस फिर्‍यो । हाफ छुट्टीमा दर्शनलाई नजिकैको स्वास्थ्यचौकी लगियो । विद्यालयले घटना गुपचुप राख्न खोज्यो । अभिभावकलाई जानकारी नै गराएन । होमवर्क नगरेकामा सजाय पाएकाले दर्शनले घरमा पनि केही भन्ने आँट गरेनन् । बाबु टुकनाथले भोलिपल्ट छोराको साथीबाट यसबारे थाहा पाएका थिए । टुकनाथका अनुसार घरमा बिहे भएकाले छोरा दुई दिन बिदा बसेर १३ गते विद्यालय गएका थिए । त्यसैले उनलाई गृहकार्यबारे थाहा
लाै हेर्नुहोस् एसईई प्रश्नपत्र लिक गर्ने ६ भाइको अनुहार !
प्रश्नपत्र बेचबिखनमा प्रहरी र शिक्षककाे मिलेमतो ! २१ चैत, सप्तरी । प्रदेश २ मा १४ र १५ चैतको एसईई परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको प्रकरणमा संलग्न ६ जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र दुई नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सप्तरीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर आरोपित दुई प्रहरी अधिकारीसहित ६ जनालाई सार्वजनिक गरेको हो । पक्राउ पर्ने प्रहरी अधिकारीमा सप्तरीको राजविराज–१० का ब्रम्हदेव सुनरैत र कञ्चनरुप–६ का दिपेन्द्रकुमार मण्डल छन् । उनीहरु सिरहाको इलाका प्रहरी कार्यालय, कल्याणपुरमा कार्यरत् जवान थिए । इप्रका, कल्याणपुरमा जनता मावि बनिया र रादु मावि कल्याणपुरको प्रश्नपत्र राखिएको थियो । जसको सुरक्षार्थ खटिएका जवान नै प्रश्नपत्र लिक गराउने कार्यमा संलग्न रहेको भेटिएका हुन् । यसअघि सामाजिक सञ्जालमा बाहिरि
चितवन, २१ चैत । रामपुर कृषि तथा वन बिज्ञान विश्वबिद्यालयका कृषि संकायका प्रशासनिक सहायक डिन तथा प्राध्यापक बिष्णुराज ओझामाथि कालोमोसो र जुत्ताको माला लगाईएको छ । विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुले ओझालाई कालोमोसो दली जुताको माला लगाईदिएका हुन् । ३० दिनमा सकाउनु पर्ने कोर्ष ४ दिन त्यसमाथि २÷ २ घण्टाका दरले ८ लेक्चरमा सकाएको र छैटौ सत्रान्तको कोर्ष तीन वटा सेक्सनका १ सय ६५ विद्यार्थीलाई एउटै सेक्सनमा राखेर झारा टार्दै कोर्ष सकाउने काम गरेको भन्दै बिद्यार्थीहरुले ओभामाथि कालोमोसो दल्नु परेकोे बताए । बिगत वषौ वर्ष देखि ओझाले बिद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरि यसरी नै कक्षा चलाउदै आएको र विरोध गर्ने कोहि निस्के उसको प्राक्टिकल नम्वरनै कम दिएर दुःख दिने गरेको बिद्यार्थीको आरोप छ । यस पटक पनि उनको शिक्षण सिकाई क्रियाकलापको बिरोध गरेका चौथो सत्रान्तको ४ जना बिद्यार्थीको नम्वर निकै
काठमाडौ‌ं‌‌ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अन्तर्गत गत १४ र १५ गते भएको विज्ञान र सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र प्रदेश २ मा बाहिरिएको घटनामा प्रहरीकै संलग्नता देखिएको छ। घटना छानविन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी)ले सिरहाको इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरमा कार्यरत दुई प्रहरी जवान ब्रम्हदेव सुनरैत र दीपेन्द्रकुमार मण्डललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यसलाई व्युरो र प्रहरी प्रधान कार्यालयले गोप्य राखेका छन्।प्रश्नपत्र बाहिरिएलगत्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र प्रदेश २ सरकारले गठन गरेका समितिले छुट्टा छुट्टै छानविन गरेका थिए। दुबै समितिले अनुसन्धान जारी रहेको बताइरहेको बेला सीआईबीले दुई प्रहरी जबानलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। एक प्रहरी उच्च अधिकारीका अनुसार सोमबार बिहान काठमाडौं ल्याइएका दुबैलाई हतकडी लगाइएको छ। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नतिजा प्रकाशित
त्रिभुवन विश्वबिद्यालयले स्नातक प्रथम वर्षको नतिजा प्रकाशित गरेको छ । त्रिविले ४ बर्षे बिएस्सी प्रथम वर्षको नतिजा आज सार्बजनिक गरेको हो । भाद्र महिनामा संचालित उक्त परीक्षामा कुल १३ हजार ३ सय ४७ बिद्यार्थी सम्मेलित भएकोमा जम्मा २८०८ बिद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । नतिजा मोबाइल एसएमएसबाट हेर्न सकिन्छ । नतिजा हेर्नको लागि नेपाल टेलिकमको नम्बरबाट 4BSCर आफ्नो सिम्बोल नम्बर लेखेर ३३६२४ मा पठाउनुहोला । र यो पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय: विद्यार्थी घट्दै, शिक्षक थपिँदै काठमाडौ । मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय । मुलुकभर झन्डै एक दर्जन अन्य विश्वविद्यालय भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयप्रतिको आकर्षण घटेको छैन । त्रिविअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न संकायमा सयौं विषयको पढाइ हुन्छ । तर, सबै विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण भने छैन । त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसम
प्रदेश २ मा एसइईका सबै परीक्षा स्थगित (प्रेस विज्ञप्तीसहित)
Posted in ब्यानर न्यूज, शिक्षा
काठमाडौं : शिक्षा मन्त्रालयले ढाकेको अकास्मिक बैठकले प्रदेश २ मा सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) का सबै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। एकपछि अर्को प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको आकस्मिक बैठकले प्रदेश २ का २६२ परीक्षा केन्द्रको एसइई अन्तर्गतको चैत १४ देखि २१ गतेसम्म तय भएका सबै विषयका परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। आइतबारदेखि एसइई परीक्षा सुरु भएको थियो। प्रदेश २ मा प्रश्नपत्र बाहिरिनु पहिले आइतबार अनिवार्य अंग्रेजी, सोमबार अनिवार्य नेपाली र बुधबार गणित विषयको परीक्षा भएको थियो। यी तीन विषयको परीक्षा भने दिनुपर्ने छैन। गत चैत्र १४ र १५ गते प्रदेश दुईमा क्रमशः विज्ञान र सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र परीक्षा दिनुअघि नै सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न मन्त्री पोखरेल अध्यक्ष रहेको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन उच्चस्तरीय
एसईईको लगातार प्रश्नपत्र आउट गराएर प्रदेश २ को बदनाम गर्न खोजिएको मुख्यमन्त्री राउतको दाबी
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले एसईई परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको घटनाको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले लगातार प्रश्नपत्र आउट गराएर प्रदेश २ को बदनाम गर्न खोजिएको दाबीसमेत गरे । प्रदेश २ मा लगातार विज्ञान र सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र परीक्षाअगावै सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्री राउतले त्यसमा केन्द्र सरकार नै जिम्मेवार रहेको बताएका हुन् । प्रदेश २ को परीक्षा प्रदेश सरकारले नभएर केन्द्र सरकारका निकायले नै गरेकाले उनीहरू नै जिम्मेवार हुने मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ छ । मुख्य मन्त्री राउतले एसईईको प्रश्नपत्र आउट हुनु प्रदेशका लागि अति नै दुःखदायी घटना भएकाले यसबारे छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न केन्द्र सरकारसँग माग गरे । ‘छानबिनको नाममा समय गुजार्ने प्रचलन छ’, उनले भने, ‘परीक्षाको प्रश्नपत्र आउट प्रकरण गम्भीर भएकाले छिटोभन्दा छिटो कारबाही हुनुपर्छ ।’
राजकरण महतो/ फणि महत/ क्रान्ति शाह जनकपुर/ वीरगञ्ज / रौटहट : प्रदेश २ मा शुक्रबार हुने सामाजिक विषयको परीक्षा रद्द भएपछि विद्यार्थीहरु सडकमा उत्रिएका छन् । विद्यार्थीको प्रदर्शन आगजनी र ढुंगामुढाबाट प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरसहित विभिन्न सहर तनावग्रस्त बनेको छ । अनिवार्य सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै बाहिरिएपछि परीक्षा रद्द गरिएको हो। तनावग्रस्त वीरगञ्ज, आगजनी र तोडफोड परीक्षा रद्द भएको आक्रोशमा वीरगञ्जका विद्यार्थीहरु सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले वीरगञ्जमा रहेको प्रहरी बिट तथा ट्राफिक लाइट तथा डिभाइडरमा आगजनी गरेका छन् । आक्रोशित विद्यार्थीले तोडफोड तथा आगजनी गरेपछि प्रहरीले ३ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ ।दमकलद्वारा पानीको फोहोरा प्रहार गरेपछि थप आक्रोशित भएका विद्यार्थीले दमकल पनि तोडफोड गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तोडफोड परीक्षा रद्द भएपछि जनप
विज्ञान विषयको प्रश्नपत्र आउट भएको प्रदेश २ मा आज हुने सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र पनि आउट, परीक्षा रद्ध, अब कहिले हुन्छ ?
एसईई परीक्षामा प्रदेश २ को समाजिक विषयको प्रश्नपत्र आउट भएको पुष्टि भएको छ । बिहीबार रातिदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नपत्र भाइरल भएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आकस्मिक बोर्ड बैठक डाकेको थियो । बोर्डले साढे ७ बजे प्रदेश २ को सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र खोलेर हेरेपछि प्रश्न पत्र आउट भएको पुष्टि गरेको थियो । कार्यालयका उप नियन्त्रक चेतनाथ शर्माले प्रश्न पत्र आउट भएको पुष्टि पछि प्रदेश २ को शुक्रबारको परीक्षा रद्द गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा रातिदेखि नै प्रश्नपत्र आउट भएको पोष्टहरु भाइरल भएको थियो। त्यो पुष्टि पनि भयो। हामीले आजको परीक्षा रद्द गरेका छौं। तर अर्को परीक्षा कहिले गर्ने भन्नेबारे मिति केहीबेर पछि निर्णय हुनेछ।’ उक्त प्रश्नपत्र सक्कली हो वा नक्कली पुष्टि हुन शुक्रबार बिहान साढे ७बजेसम्म कुर्नुपर्ने राष्ट्रिय